100G Warshad Taxane | Shiinaha 100G Soosaarayaasha Taxanaha, Alaab-qeybiyeyaal
100Gb / s QSFP28 CWDM4 1310nm 2km DDM DFB qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s QSFP28 CWDM4 waa afar-kanaal, laysku xidhi karo, qaabilaad isbarbar yaac ah isla markaana loogu talagalay 100G CWDM codsi leh FEC, Datacenter iyo shabakad isku xidha iyo xiriiriyeyaal kale oo indhaha ah. Waxay waafaqsan yihiin qeexitaanka SFF-8636, IEEE 802.3ba 100GBASE-CLR4 / CWDM4 iyo Telcordia GR-468-CORE. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s QSFP28 ER4 1310nm 40km DDM EML qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s QSFP28 ER4 waa afar-wadiiqo, la-furi karo, is-beddeliye muraayadaha indhaha isla markaana loogu talagalay 100 Gigabit Ethernet applications. Waxay waafaqsan yihiin qeexitaanka SFF-8665, IEEE 802.3bm 100GBASE-ER4 iyo Telcordia GR-468-CORE. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100GBASE-LR4 iyo 112GBASE-OTU4 QSFP28 Qiyaasta Labada Dhinac 1310nm 100m DDM DML & Pin LC gudbiyaha indhaha
100Gb / s QSFP28 LR4 waa afar-kanaal, laysku xidhi karo, qaabilaadaha isbarbardhiga indhaha oo loogu talagalay 100 Gigabit Ethernet, InfiniBand EDR, FDR, QDR codsiyada. Waxay waafaqsan yihiin qeexitaanka SFF-8665, IEEE 802.3bm 100GBASE-LR4 iyo Telcordia GR-468-CORE. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s QSFP28 SR4 850nm 100m DDM VCSEL MPO qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s QSFP28 SR4 waa a
afar-kanaal, laysku xidhi karo, wax isdhaafsiiyaha isbarbar dhiga oo loogu talagalay 100GBASE-SR4 iyo 100 Gigabit Ethernet, InfiniBand EDR, FDR, codsiyada QDR. Waxay waafaqsan yihiin qeexitaanka SFF-8665, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 iyo Telcordia GR-468-CORE. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s QSFP28 SR4 850nm 100m DDM Heerka Labaad VCSEL MPO / MTP gudbiyaha indhaha
afar-kanaal, laysku xidhi karo, wax isdhaafsiiyaha isbarbar dhiga oo loogu talagalay 100 Gigabit Ethernet, Xarunta Xogta, InfiniBand QDR, DDR, SDR iyo codsiyada CPRI10. Waxay u hoggaansamaan QSFP28 MSA u hoggaansamaysa, IEEE 802.3bm. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS-6.
100Gb / s QSFP28 LR4 waa afar-kanaal, laysku xidhi karo, qaabilaadaha isbarbar dhigaya isla markaana loogu talagalay 100 Gigabit Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F, codsiyada CPRI 10. Waxay u hoggaansamaan IEEE P802.3ba iyo istaandarka OTU4 4I1-9D1F. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 10km DDM DFB qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s QSFP28 PSM4 waa afar-kanaal, la-furi karo, is-qaadsiiyaha isbarbar dhiga oo loogu talagalay 100GBASE-PSM4 iyo 100G Ethernet, InfiniBand DDR, codsiyada EDR. Waxay waafaqsan yihiin qeexitaanka SFF-8636, IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 iyo Telcordia GR-468-CORE. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 500m DDM DFB qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 2km DDM DFB qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s QSFP28 PSM4 waa afar-kanaal, la furi karo, isla markaana la qaadan karo qalabka wax lagu beddelo isla markaana loogu talagalay 00GBASE-PSM4 iyo 100G Ethernet, InfiniBand DDR, codsiyada EDR. Waxay waafaqsan yihiin qeexitaanka SFF-8636, IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 iyo Telcordia GR-468-CORE. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s CFP 1310nm 10km DDM LAN-WDM EML qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyeyaasha CFP waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo 100 Gigabit Ethernet xiriiriyeyaal ka badan 10km hal fiboor oo keliya, waxayna u hoggaansameysaa faahfaahinta CFP MSA iyo IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Baadhista dhijitaalka ah ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo MDIO. CFP LR4 waa mid waafaqsan shuruudaha RoHS.
100Gb / s CFP 850nm 100m DDM VCSEL qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyeyaasha CFP waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo 100 Gigabit Ethernet links iyo 10x11.2Gb / s Multimode OTN. Waxay u hoggaansamaan Qeexitaanka CFP MSA iyo IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. Baadhista dhijitaalka ah ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo MDIO. Qalabka wax lagu wareejiyo ee indhaha ayaa waafaqsan shuruudaha RoHS.
100Gb / s CFP2 1310nm 10km DDM LAN-WDM EML qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyeyaasha CFP2 waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo 100 Gigabit Ethernet xiriiriyeyaal ah 10km hal fiboor oo keliya ah, waxayna u hoggaansameysaa faahfaahinta CFP MSA CFP2 HW iyo IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Baadhista dhijitaalka ah ayaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo MDIO sida ku cad Qeexitaanka Maareynta Maareynta Maareynta CFP.